Hay’ada IMF oo Itoobiya Eedayn Culus Dusha Usaartay. | ogaden24
Hay’ada IMF oo Itoobiya Eedayn Culus Dusha Usaartay.
Hay’ada lacagta aduunka ee The International Monetary Fund (IMF) ayaa wadanka gumaysiga Itoobiya u aqoonsatay wadanka daymaha ugu badan lagu leeyahay, waxayna hay’adu sheegtay in Itoobiya daymaha ay qaadato dib u eegis lagu samayn doono.
Hay’ada lacagta aduunka IMF ayaa xukuumada wayaanaha ku eedaysay mid aan xil iska saarin lacagaha daynta ah ee lagu yeesho, isla markaana waxay hay’adu sheegtay in xukuumadu ay noqotay mid lacag daynsata balse aan bixinin.
Sanduuqa lacagta aduunka ayaa sheegay in Itoobiya ay siiyeen kaalmo aad ubadan oo lacageed, wuxuuna sanduuqu intaas kudaray in kaalmadii lasiinayay Itoobiya ay noqotay hal bacaad lagu lisay, isla markaana dadkeeda mar kasta lagasoo dayriyo.
War bixino dhowr ah oo ay soo saareen Hay’adaha deeqaha bixiyay ay kusheegeen in wadanka Itoobiya uu yahay midka ugu liita wadamada Africa, marka laga eego dhinaca nolosha bini’aadamka, waxayna hay’aduhu diiwaan galiyeen in kabadan 8 milyan oo ciyaal ah oo macaluul ay hayso.
Sidoo kale hay’adaha ayaa sheegay in tiro aad ubadan oo Itoobiyaan ah ay kutabaalaysan yihiin wadanka uu musuq maasuqu ladagay ee Itoobiya, waxayna hay’aduhu xukuumada wayaanaha ku eedeeyeen in gargaarka bini’aadam nimo uusan gaadhin dadka ubaahan iyadoo sida ay hay’aduhu sheegeen loo adeegsado dhinaca ciidanka.
Meelaha ugu daran ee xukuumada wayaanuhu ay cunaqabataysay waxaa kamid ah wadanka Ogadenia ee kujira gacanta gumaysiga Itoobiya.